निसान हत्याकाण्डः चमेलीले अन्तिममा लिएकी थिइन् गाेपाल तामाङकाे नाम - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
निसान हत्याकाण्डः चमेलीले अन्तिममा लिएकी थिइन् गाेपाल तामाङकाे नाम
लाेकप्रियताका लागि प्रहरीकाे ‘फेक इन्काउन्टर’
दीपक खरेल काठमाडौं साउन २३
छाेरा हत्याकाे शाेकमा विह्वल निशान खड्काकी अामा चमेली। तस्विर: प्रविन काेइराला
प्रहरीका दुर्इ निकाय निसान अपहरणपछि हत्या र कृत्रिम मुठभेडमा आफ्नो कमजोरी लुकाउन एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्।
प्रहरीका दुर्इ निकाय निशान खड्का अपहरणपछि हत्या र कृत्रिम मुठभेडमा आफ्नो कमजोरी लुकाउन एकअर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरिरहेका छन्।
महानगरीय अपराध महाशाखा र काठमाडौं प्रहरी एकअर्कालाई दोषी देखाएर आफू चोखो हुने प्रयासमा लागेका हुन्।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार काठमाडौं परिसर र महाशाखाका गतिविधिका विषयमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
महानिरीक्षक खनालले काठमाडौं परिसरका प्रमुख विश्वराज पोखरेलले अपहरणकारीलाई एसएमएस पठाएको घटना र पक्राउ परेपछि गरिएको कृत्रिम मुठभेडको संरक्षण नगरी आइपर्ने अप्ठयारोको सामनाका लागि तयार रहन संकेत दिएका हुन्।
यद्यपि प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुधबार बेलुकासम्म घटनाका विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
संसद र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्म घटनाको उजुरी र चर्चा भएपछि प्रहरी महानिरीक्षक खनाल काठमाडौं परिसर र महाशाखासँग असन्तुष्ट बनेको स्रोतले बतायो। प्रहरीले अपहरणकारीलाई धम्काएर पठाएको एसएमएसको विवरण बाहिरिएपछि खनाल झन् रुष्ट भएका हुन्। यस्तै अपहरणकारीको कृत्रिम मुठभेडमा समेत खनाल असन्तुष्ट देखिएका छन्।
कमजोर कमाण्ड, शून्य योजना
महानगरीय प्रहरी कार्यालयले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा मातहतका दुई इकाईको मनोमानीले निसान खड्काको हत्या र कृत्रिम मुठभेड (फेक इन्काउन्टर) को अवस्था आएको प्रष्ट हुँदै गएको छ। काठमाडौं प्रहरीका प्रमुख एसएसपी विश्वराज पोखरेल र महानगरीय अपराध महाशाखा प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत ‘इगो’ ले निसान खड्काको हत्या र अपहरणमा संलग्न दुई अपहरणकारीको नियोजित हत्या भएको घटनाक्रमले देखाएका छन्। घटनामा काठमाडौं प्रहरी मातहत खटिएका अधिकारी र महाशाखाबाट खटिएका अधिकारीबीच समन्वय समेत भएको देखिँदैन।
मामासँग निशान खड्का
नेपालखबरलाई प्राप्त थप घटना विवरणअनुसार महानगरीय प्रहरी कार्यालयको कन्ट्रोल कक्षमा आइतबार राति सवा ९ बजे आएको अपहरणसम्बन्धी सूचनाको विश्लेषण र सोही अनुसारको योजना तथा परिचालनमा कमजोरी देखिएको हो। काठमाडौंमा हुने साना–ठूला घटनाको कारवाहीमा परिपूरक मानिने काठमाडौं परिसर र अपराध महाशाखाबीच निसान अपहरण र हत्यामा सहकार्य भएको देखिँदैन।
घटनाको पहिलो सूचना प्रहरी परिसर भक्तपुरले पाएको थियो। भक्तपुर परिसरका ड्युटी अफिसरलाई ९८२३६७३३०१ बाट घटनाबारे पहिलो सूचना आएको थियो। भक्तपुर प्रहरीले सोही सूचना कार्यालयको कन्ट्रोललाई टिपाएको थियो। फोन गर्नेले काठमाडौं काँडाघारी पेप्सीकोला क्षेत्रबाट एकजना ११ वर्षे बालक आइतबार ६ बजेदेखि हराएको र केही समयअघि ती बालकको आमालाई फोन गरी ४० लाख फिरौती मागिएको जानकारी दिएका थिए।
कन्ट्रोल रुममा ९८४३६२०६७० बाट बालककी आमालाई फिरौतीका लागि फोन आएको जानकारी थियो। यस्तै अपहरणमा परेका बालकले अर्जेन्टिनाको फुटवल टिमको टिसर्ट, कालो ट्राउजर, कालो चप्पल लगाएको विवरण टिपाएका थिए। उनको हुलिया गहुँगोरो र दाहिने हातमा टाँका लगाएको खत रहेको जानकारी थियो।
सम्बन्धित खबर: निशान खड्का हत्याकाण्डको साेझो प्रश्न: जीवन रक्षा गर्न कहाँ चुक्यो प्रहरी?
प्रहरी कन्ट्रोलको सूचना पाउना साथ प्रभाग काँडाघारीबाट टोली घटनास्थल पुगेको थियो। त्यसको केही समयमा वृत्त बानेश्वरबाट टोली पुगेको थियो। काठमाडौं प्रहरी मातहतका यी इकाई सक्रिय भइरहेका बेला अपराध महाशाखा समेत सक्रिय थियो। उसले फिरौतीका लागि आएको फोनको अन्तिम लोकेशन र त्यसपछिका गतिविधि प्राविधिक रुपमा अनुगमन गरिरहेको थियो।
प्रहरीले फिरौतीका लागि फोन आइसकेपछि सोही नम्बरमा बारम्बार फोन सम्पर्कको प्रयास गरेको थियो। तर फोन स्वीच अफ भएकाले परिसर प्रमुख पोखरेलले अन्तिममा धम्कीपूर्ण एसएमएस पठाएका थिए। जुन सोमबार बिहान महाशाखाले मोबाइल भेटेपछि डेलिभर भएको थियो।
परिसरले यसलगत्तै गणबाट थप बल मगाएर परिसर भक्तपुरको सहयोगमा नाकाहरुमा ब्यारियर हालेर चेक जाँचलाई तीब्र बनाएको थियो। यता महाशाखाले समेत प्रविधिको सहयोगमा अनुसन्धानलाई तीब्रा पारेको थियो। प्रहरीले अपहरणकारीको अन्तिम लोकेशन भक्तपुरको ठिमी क्षेत्र पत्ता लगाएको थियो। यसकै लागि आइतबार बिदामा रहेका वृत्त ठिमीका प्रमुख मिलन केसीलार्इ भक्तपुर प्रहरी प्रमुख हिमालय श्रेष्ठले बोलाएका थिए। डिएसपी केसी साढे १० बजे वृत्तमा पुगेका थिए।
अपहरण अनुसन्धानमा यसअघि प्रहरीको महाशाखाले लिड गर्ने र परिसरले सघाउने गर्दै आएका थिए। तर निसान अपहरणको घटनामा महाशाखाको टोली र परिसरको टोली अलग–अलग भएर खोजीमा जुटेका थिए। प्रहरीको यही रस्साकस्सीबीच आइतबार राति कुनै उपलब्धि हासिल हुन सकेन।
सोमबार बिहान काठमाडौं प्रहरी प्रमुख पोखरेलले वृत्त ठिमीमा निसानकी आमा चमेलीसँग सोधपुछ थालेका थिए। चमेलीले एक एक गर्दै शंकास्पद र निकटहरुको नाम बताउने क्रममा गोपाल तामाङको नाम बाहिर आएको थियो।
‘सधैँ खाना खाने गोपाल पनि हो, आइतबार पनि आएको थियो, त्यसले त के गर्यो होला। मलाई निकै सहयोग गर्छ,’ चमेलीको भनाई उद्धृत गर्दै एक प्रहरी अधिकारीले भने। यसपछि काठमाडौं प्रहरीले गोपाललाई चिन्ने व्यक्तिको खोजीका लागि बौद्ध क्षेत्रमा समेत प्रहरी परिचालन गरेको थियो। चमेलीसँग ठिमी वृत्तमा पोखरेलले कडीकडाउ गरेपछि गोपालको नाम खुलेको थियो।
काठमाडौ प्रहरीको सोधखोज चलिरहेको समयमै महाशाखाको टोलीले गोपाल र अजयलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। महाशाखाकै सूचना अनुसार निसानको शव वृत्त ठिमीको टोलीले बरामद गरेको केही समयपछि काठमाडौं प्रहरी फिर्ता आएको थियो।
हाकाहाकी कृतिम मुठभेड
प्रहरीले मुठभेड भएकाे भनिएकाे सूर्य विनायकस्थित। तस्विर: प्रविन काेइराला
काठमाडौं प्रहरी सोमबार बिहान १० बजे फर्किएपछि अनुसन्धान र कारवाहीको कमाण्डमा महाशाखा मात्र थियो। महाशाखाले नियन्त्रणमा लिएका गोपाल र अजयलाई काठमाडौं प्रहरीको जिम्मा लगाउनुको साटो केही समय आफैसँग राखेको थियो। त्यसपछि दुबैलाई गाडीमा हालेर सूर्यबिनायक सामुदायिक बनमा लगेर मुठभेड भन्दै हत्या गरेको देखिएको छ।
प्रहरीले मुठभेड दाबी गरे पनि घटनास्थलको छनौट, प्रत्यक्षदर्शीको बयान एवं हत्याको प्रकृतिले प्रहरी ‘इन्काउन्टर’ स्थापित हुन सकेको छैन।
प्रहरीले सैनिक इलाका र मानिस आवत जावत गर्ने सामुदायिक बनमा दर्जनौं गोली प्रहार गरेको दाबी गरेको छ। प्रहरीले कृत्रिम मुठभेडका लागि छनौट गरेको क्षेत्रबाट केही दुरीमा नेपाली सेनाको वीरदल गण, सामुदायिक विद्यालय र मानव बस्ती छ। प्रहरीले मुठभेड समेत सोही स्थानमा गरेको हो वा बाहिर नै हत्या गरेर शव त्यहाँ लगिएको भन्ने शंका छ।
‘दिदी रुन–कराउन थालेपछि प्रहरीमा खबर गरें’
घटनाको दिन निसानकी आमा चमेलीसँग उनकै खाजा पसलमा रहेका मोरङका दीपक पोखरेलले समेत अपहरणकारीसँग कुरा गरेका थिए। उनी खाजाघरमै रहेको समयमा अपहरणकारीले फोन गरेपछि चमेलीले आत्तिँदै फोन पोखरेललाई दिएकी थिइन्। ‘हेर्नुुस् न बाबुलाई किडन्याप गरेको छु भन्दै फोन गर्छ भन्दै रुन थाल्नु भो, मैले फोन लिएर कुरा गर्दा ४० लाख मागेको हो, को किन भन्दा भन्दै फोन काटियो,’ काँडाघारी क्षेत्रमा हार्डवेयर सम्बन्धी काम गर्ने पोखरेलले भने।
‘गोपाल र अजय दिदीले नै पकाएको खाएर काम गर्थे, निसानलाई पनि साईकल दिने गरेका थिए। खै कसरी उनको हत्या गर्न सके,’ पोखरेलले भने। उनले चमेलीको पसलमा दैनिक जसो गोपाल र अजयसँग भेट हुने गरेको बताए।
‘दिदीले दैनिक पैसा सहकारीमा जम्मा गर्ने गरेको र वैदेशिक रोजगारमा रहेका दाईले पैसा पठाएको देखेर नियत बिग्रिएको हुनसक्छ,’ पोखरेलले थपे।
आफूले प्रहरीलाई फोन गरेपछि केही समयमा नै सो क्षेत्रमा प्रहरीको बाक्लो चहलपहल भएको उनले बताए।
‘निसानलाई फकाएर लगे होलान, प्रहरीले एसएमएस गरेपछि डराएर हत्या गरे कि’, पोखरेलले भने।
१. मुठभेडमा मारिएका हत्याराविरुद्ध निशानकी आमाकाे जाहेरी
२. फिरौती भन्दा हत्याका लागि निशानको अपहरण!
३. स्व निशान खड्का: जो मेस्सी मन पराउँथे, स्पाइडरम्यानलाई हिरो मान्थे
४. निशानका हजुरबा भन्छन्ः बावु विदेशमा छन्, जुठा भाँडा माझेर हुर्काएको नाती हो
५. निशानका हत्यारा जो उनकै पसलमा खाजा खान्थे
६. निशान खड्का अपहरण: यस्तो थियो भीडन्तस्थल, यी हुन् अपहरणकारी
७. काँडाघारीबाट अपहरणमा परेका बालकको हत्या, प्रहरीको कारबाहीमा दुई अपहरणकारीको मृत्यु
प्रकाशित २३ साउन २०७५, बुधबार | 2018-08-08 20:16:16